Tag: Adreesị api | Martech Zone
Tag: Adreesị api
Tupu ịmalite ịrụ ọrụ na ntanetị, arụrụ m ọrụ afọ iri na akwụkwọ akụkọ na ụlọ ọrụ na-ezipụ akwụkwọ ozi. Ebe ọ bụ na nzipu ozi ma ọ bụ izipu nkwukọrịta ahịa anụ ahụ dị oke ọnụ, anyị kpachapụrụ anya banyere ịdị ọcha data. Anyị chọrọ otu mpempe n'otu ezinụlọ, ọ bụghị karịa. Ọ bụrụ na anyị nyefere ụyọkọ otu akwụkwọ ozi ahụ na adreesị, ọ kpatara ọtụtụ nsogbu: Onye na-azụ ahịa nwere nkụda mmụọ ga-apụ na nkwukọrịta ahịa niile. Agbakwunyere efu nke ụgwọ nzipu ozi ma ọ bụ